किन बन्न सकेन रमितको ‘राजा साहेब’ ? « THULOPARDA.COM
किन बन्न सकेन रमितको ‘राजा साहेब’ ?
अभिनेता रमित ढुंगानाले १८ लाख पारिश्रमिक लिएको खबरका कारण चर्चामा रहेको चलचित्र ‘राजा साहेब’ को गएको साउनमा औपचारिक निर्माण घोषणा गरिएको थियो । चलचित्रमा रमितको जोडी सोनिका केसी र आइशा राईसँग बाँधिएको थियो । तर, निर्माण घोषणा भएको झण्डै ५ महिना हुँदासम्म पनि चलचित्रको छायांकन सुरु भएको छैन ।
चलचित्र निर्माण गर्न अगाडि सरेका निर्माताले छायांकन सुरु हुने समयमा हात झिकेपछि ‘राजा साहेब’ निर्माण हुन नसकेको जानकारी प्राप्त छ । शंकर न्यौपाने, आकाश राई र आइशा राई कार्यकारी निर्माता र चन्द्र लामा, ज्याक शुब्बा र भिम कार्की निर्माताको रुपमा रहने चलचित्रको घोषणा कार्यक्रममा जनाइएको थियो । तर, निर्माताबीच लगानीको कुरामा मनमुटाव भएपछि चलचित्र छायांकनमा नजाँदै थन्कियो ।
बिचल किराँतीले निर्देशन गर्ने भनिएको चलचित्रका लागि अहिले नयाँ निर्माताको खोजी भैरहेको स्रोत बताउँछ । तर, रमितको चलचित्रमाथि लगानी गर्न कोही निर्माता अगाडि सरेका छैनन् । एक समय उनलाई चलचित्रमा लिन निर्माताबीच हानाथाप चल्थ्यो । उनी भएपछि चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्ने विश्वास उनीहरुमा थियो । तर, अहिले उनको क्रेज कमजोर भैसकेको छ । यसकारण पनि उनको चलचित्रमा लगानी गर्ने निर्माता भेटिएका छैनन् ।